Golaha Wasiirrada K/Galbeed oo yeeshay kulankoodii ugu horreeyay+ Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Golaha Wasiirrada K/Galbeed oo yeeshay kulankoodii ugu horreeyay+ Sawirro
By Abdihakim Sharif Ali / February 28, 2019 February 28, 2019
Baydhabo-(SONNA)-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya, Mudane; C/Casiis Xasan Mohamed lafta –gareen, ayaa Maanta guddoomiyey Shirkii ugu horeeyay ee Golaha wasiirrada Maamulkaasi.
Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb galay dhammaan Wasiirrada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ugu horeyn isu bartay Wasiirrada dhawaan la Magacaabay iyo Madaxweyne Lafta gareen.
Waxaa inta badan looga hadley shirka, sidii ay xilalka isugu wareejin lahaayeen Wasiirrada cusub iyo kuwii hore,iyo sidii loo dar-dar galin lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka ka Jira degaannada Koonfur galbeed.
Golaha wasiirrada ayaa isla soo qaaday, sida ugu habboon ee loo wajihi karo wax ka qabashada xaaladaha haatan taagan oo ay ay ka mid Yihiin Biyo yarida ,amniga, Caafimaadka , Waxbasharada , Caddaaladda Iyo furidda waddooyinka ay go’doomiyeen Maleeshiyaadka Al-shabaab.
Shalay ayey ahayd markii cod aqlabiyad ah ay ku ansixiyeen Xildhibaannada Baarlamanka Koonfur galbeed Soomaaliya Golaha Wasiirrada cusub ee Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya.